'जग्गा राज्यको हुन्छ, व्यक्तिको हुँदैन' : अर्थमन्त्री खतिवडा
‘जग्गा राज्यको हुन्छ, व्यक्तिको हुँदैन’ : अर्थमन्त्री खतिवडा
१५ मंसिर २०७५, शनिबार १५:१०
काठमाडौँ । अहिले सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका अर्थ विशेषज्ञ डा. युवराज खतिवडा कर र भ्याटको कारणले चर्चाको शिखरमा रहेका छन । उनले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरैं कुराहरु सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदैं आएका छन ।
जमिनको स्वामित्व सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले सबै क्षेत्रको लागत बढाएको र वित्तीय स्थायित्वमै समस्या भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । नेपाल समाजशास्त्र संघको कार्यक्रममा बुधबार उनले जमिन निजी सम्पत्ति नभई भोगाधिकार मात्रै हुनुपर्ने बताए ।
‘जमिन राज्यको हुनुपथ्र्यो । निजी सम्पत्तिका रूपमा हुनुपर्छ भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरिहाल्यौं,’ उनले भने, “जमिनमा कसैको स्वामित्व हुँदा सबै क्षेत्रको लागत बढ्यो । विकास निर्माण, वित्तीय स्थायित्वलगायत सबै क्षेत्रमा समस्यै समस्या भयो ।”
प्राकृतिक स्रोतहरू जल, जंगल र जमिन राज्यको हुनुपर्ने उनको धारणा छ । “यसबारे संविधान बनाउने बेलामै बहस हुनुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेनौं । विकास निर्माणका काममा राज्यले कति जमिन किन्ने ? कति मुआब्जा दिइरहने ?” आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।